Nhau - Chengetedzo yeWelding PE Electrofuion Fittings
Chengetedzo yeWelding PE Electrofuion Fittings
1. Panguva yekuisa, organic matter nezvimwe zvinhu zvinorambidzwa zvachose kusvibisa mukati memadziro e electrofusion fitting uye welding nzvimbo yepombi.Iyo oxidation layer inofanirwa kukwenenzverwa uye kubviswa zvakaenzana uye zvakakwana.(Chengeta kuvabvisa)
2. Panguva yekumisikidzwa kwesaiti, imwe kana maviri electrofusion fittings inofanira kushandiswa kuvimbika welding stripping test in advance, uye yobva yapepetwa kuti itarise caking kugona kwepombi nekukodzera.
3. Zvinoenderana nekushisa uye kushanda kwemagetsi enzvimbo yemunda uye welding machine, nguva yekugadzira inogona kubhadharwa zvakakodzera kana maparameters anogona kugadziriswa.
4. Zvinoenderana nezvinodiwa zveelectrofusion welding muchina wemagetsi ekuisa magetsi, haizove shoma pane inodiwa yekupinza voltage, welding muchina uri kure nemagetsi, inosimbirira patambo dzemagetsi kuti dhayamita, iyo yakakura kuti irege kuoneka pasi pesimba remagetsi welding. mhando (pasi pe8 kw welding simba ine national standard 4 square, inopfuura 8 kw ine national standard 6 square line, kureba kwetambo hakusi kudarika 100 metres).
6. Simba remugadziri rinofanira kufanana nehukuru hwechigadzirwa chekugadzirisa uye simba rinodiwa nemagetsi ekugadzirisa.Mucheka wekucheka wepombi uchavharwa ne extrusion welding gun.Zvinorambidzwa zvachose kushandisa pombi isina kuvharwa.Kana kucheka kwekucheka kusina kuiswa chisimbiso, kuvakwa kwe welding hakubvumirwi.
7. Paunenge uchiputira pombi fittings, gara kure ne welding pombi fittings kusvikira welding yapera uye yatonhodzwa kwemaminitsi makumi matatu.Kana munhu akuvara.
1. Mukuputirwa kwe electrofusion fittings, iyo oxidalationlayer haina kukwenenzverwa zvachose, uye guruva nemarara hazvina kukwenenzverwa zvakachena, izvo zvinogona kutungamira nyore kukupatsanurwa kwese migumo yese ye virtual welding yefittings, kudonha pasi pasi pekumanikidzwa, kuyerera kwemvura, uye kunyange kuputsa fittings.
2. Polish oxidation layer nemashizha, uye zvinorambidzwa kushandisa mashizha ekucheka panzvimbo.mablades anofanirwa kutsiviwa nguva nenguva, uye mablades ane hembe dzakakomba anorambidzwa kukwenenzverwa.
3. Kana iyo yakadzika yekuisa isiri munzvimbo, waya yemhangura ichave yakaratidzwa panguva yekuputika kwepombi fittings, izvo zvinogona kutungamirira nyore kusvuta, slurry uye kunyange moto.
4. Kana paine chifukidzo cheutsi, deredza nguva yewelding ne10% kusvika 20% muchikamu chekupedzisira, PE solid wall pombi inogona kuderedza nguva yewelding ne10% kusvika 30%.
5. Musoro wemhangura wemutsara wekugadzira welding machine unofanirwa kunyatsoenderana uye wakamira kana waiswa mupini yepombi.Zvikasadaro, zvinozotungamira mukusangana kwakashata uye kutyora waya yemhangura yepombi fittings kana chikamu chemhangura chemusoro we welded pombi fittings.
6. Kana tembiricha yakasiyana kwezvakatipoteredza yakakura, kana kupfuura 250mm yepombi kumativi ose e electrofusion fittings inofanira kugadziriswa ne pulser kudzivirira chero kudimbura kwe welded pombi fittings.
7. Apo pombi inomanikidzwa, inofanira kupera.Mvura inofanira kubaiwa panzvimbo yakaderera uye gasi rinofanira kubudiswa pakakwirira.